स्वास्थ्यकर्मी र सरकारको कुरा पहिले सुनौँ त्यसपछि सामाजिक सञ्जालको - निष्पक्षखबर
स्वास्थ्यकर्मी र सरकारको कुरा पहिले सुनौँ त्यसपछि सामाजिक सञ्जालको
केही समय अघि सरकारका निर्णयको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्याे । यस्तो क्रम दाहोरियो पनि । त्यसपछि सरकार सामाजिक सञ्जालले चलाउन थालेको भनेर विरोध पनि भयो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रभाव कति पर्छ भन्ने हिजो गरिएको दीप प्रज्वलनले पनि प्रष्ट पार्याे । नेपालमा हिजो गरिएको दीप प्रज्वलन सामाजिक सञ्जालमा गरिएको अनुरोधका आधारमा भएको थियो । सो दीप प्रज्वलनको विपक्षमा कुरा गर्ने कतिपयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको आह्वानको समर्थन भने त कतिपयले भारतीय जनता पार्टीको स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको दीप प्रज्वलनसँग जोडिएको बताए ।
हिजो रवि प्रदोष व्रत परेकाले विश्वशान्तिको कामनाका लागि दीप बाल्न ज्योतिषशास्त्रअनुसार अनुरोध गरिएको भन्ने टिप्पणी पनि आए । तर जेजस्ता टिप्पणी आए पनि मानिसमा भगवान्प्रति आस्थावान् धेरै रहेछन् भन्ने चाहिँ देखायो ।
यहाँ आस्था र विश्वासभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रभावको बारेमा उल्लेख गर्न खोजिएको हो । हामी सामाजिक सञ्जालको यसरी नै पछि लाग्यौँ भने कुनै अफवाह वा अपुष्ट खबर आयो भने पनि यसरी नै पछि लाग्ने रहेछौँ भन्ने हो । आस्थासँग जोडिएर कुनै अनर्गल प्रचार आयो भने समाज कतातिर जाला भन्ने चिन्ता हो ।
अहिलेको समय भनेको स्वास्थ्यकर्मी र सरकारको कुरा सुन्ने हो । सामाजिक सञ्जालको पछि लाग्ने होइन । सरकार र स्वास्थ्यकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्नुहोस् भनेको अवस्थामा बेग्लै कुरा हो । सरकारले गरेका सही निर्णयको समर्थन र गलत निर्णयको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुनु राम्रो हो । तर विपद्को घडीमा पनि राजनीति गर्नु कदापि राम्रो होइन । स्वास्थ्यकर्मीको माग के छ, त्यो सरकारले पूरा गरेको छ कि छैन ? स्वास्थ्यकर्मी कति जोखिममा छन्, स्वास्थ्य सामग्री कति भरपर्दाे छ ? त्यसमा बहस गरौँ । अहिलेको अवस्थामा हामीले स्वास्थ्यकर्मीको कुरा सुन्ने हो, सरकारको कुरा सुन्ने हो । हामीलाई सही सूचना र जानकारी दिनुहोस् भनेर घच्घच्याउने भनेको स्वास्थ्यकर्मी र सरकारलाई नै हो । त्यसपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालको सूचना ।
पहिलो चरणमा १ हजार ८ सय परिवारले राहत पाए, दाेस्राे चरणमा कतिले पाउने ?